SOMA 2015, Mac App Store တွင်ထိတ်လန့်စရာဂိမ်းအသစ် | ငါက Mac ကပါ
SOMA 2015, Mac App Store တွင်ထိတ်လန့်စရာကောင်းသောဂိမ်း
SOMA 2015 သည် Frictional Games မှဖန်တီးထားသောသိပ္ပံဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်သည် Amnesia: မှောင်မိုက်အဆင်း။ ၎င်းသည်ဝိသေသလက္ခဏာ၊ သြတ္တပ္ပစိတ်နှင့်လူသားဖြစ်ခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကြီးမားသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဒီဂိမ်းကို Mac App Store မှာထုတ်ဝေလိုက်ပြီ ဒီဇင်ဘာလ 23 အတိတ်နှင့်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ် 29,99 €.
ရေဒီယိုပျက်နေပြီ၊ အစားအစာလည်းမရှိတော့ဘူး၊ စက်တွေကလူတွေလို့ထင်လာတယ်။ PATHOS-II ရေငုပ်သင်္ဘောသည်ပြaနာတစ်ခုခံစားခဲ့ရသည် ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတော့မယ်။ ဒီမှာဗီဒီယိုပါ နောကျတှဲရထား Soma 2015 ၏။
'SOMA 2015' နှင့်ကမ္ဘာသို့ရိုက်ထည့်ပါ ပင်လယ်လှိုင်းတံပိုးအောက်၌သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံသည့်ထိတ်လန့်မှုကိုရင်ဆိုင်ရ။ ပရမ်းပတာနောက်ကွယ်မှအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ရန်တံခါးပိတ်ဆိပ်ကမ်းများနှင့်လျှို့ဝှက်စာရွက်စာတမ်းများမှတဆင့်ဖျက်ပစ်ပါ။ နောက်ဆုံးကျန်ရှိနေသေးသောနေထိုင်သူများကိုရှာဖွေပြီးဘူတာရုံ၏ကံကြမ္မာကိုနောက်ဆုံးပေါ်ပုံဖော်မည့်အဖြစ်အပျက်များတွင်ပါ ၀ င်ပါ။ သို့သော်သတိထားပါ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုလူသားတွေ, လိမ်သတ္တဝါများ, အရူးစက်ရုပ်အလွန်ကြီးစွာသောအတုဥာဏ်နှင့်အတူနေရာအနှံ့ inscrutable စက်တောင်မှ။
သင်လမ်းရှာရန်ရှိသည် သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ဆက်ဆံပါ။ တိုက်ပွဲတွေမှာမင်းဟာရန်သူတွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီးခြေထောက်တွေကိုပြေးနေတယ်ဆိုတာသတိရပါ။ ဒီဂိမ်းကိုသာတွေ့နိုင်သည် အင်္ဂလိပ်.
တင်ပါတယ်: 23 / 12 / 2015
အရွယ်: 12.16 GB ကို
ဆော့ဖ်ဝဲရေး: ပွတ်တိုက်အားကစားပြိုင်ပွဲ AB
ကုန်ချ SOMA ၈အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Mac App Store မှတိုက်ရိုက်၊
SOMA ၈€ 29,99
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » SOMA 2015, Mac App Store တွင်ထိတ်လန့်စရာကောင်းသောဂိမ်း
Griffin တင်ပြသောခရီးသွားအားသွင်းစက်နှင့်သင်၏ Apple Watch တွင်ဘက်ထရီကုန်သွားသည်